Nhau - Zivo yesimbi yesimbi isina waya
Sekureva kwezvinhu zvakasvibirira, simbi isina waya simbi waya inogona kukamurwa kuita mhando mbiri: silika skrini uye yesimbi waya skrini. Iyo silika skrini ndiyo yekutanga skrini, uye iyo isina simbi skrini inoshandurwa kubva pasilika skrini. Stainless simbi pajira riya inowanzo shandiswa pakuongorora uye kusefa pasi peasidhi uye alkali mamiriro, eiyo matope skrini mune peturu mafuta indasitiri, ye screen screen skrini mune chemakemikari fiber indasitiri, yekutora pickling skrini muelectroplating indasitiri, uye yegasi uye emvura kusefa uye kumwe kuparadzaniswa kwenhau. Kazhinji, simbi isina waya mesh waya, nickel waya uye waya yendarira zvinoshandiswa sezvinhu. Kune mhando shanu dzenzira dzekuruka nadzo: weave weave, twill weave, plain Dutch weave, twill Dutch weave uye Reverse Dutch weave. Anping County ine makore mazhinji esirika yekugadzira zvigadzirwa, ine huwandu hwesimbi simbi mesh yekugadzira mabhizinesi, kugadzirwa kwesimbi isina tsvina mesh firita mashandiro akatsiga, akanaka uye mamwe maitiro. Tinogona zvakare kugadzira uye kugadzira akasiyana marudzi esimbi simbi mambure zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi. Nhasi, ndoda kuzivisa mamwe marudzi esimbi simbi waya pajira riya.
Kune mhando shanu dzenzira dzekuruka nadzo mambure akarukwa: weave weave, twill weave, plain Dutch weave, twill Dutch weave uye Reverse Dutch weave.
1. Plain Stainless simbi pajira riya:
Ndiyo nzira yakakosheswa yekuruka, chinhu chakanyanya kuwanda kweiyo warp uye dhayamita yewft.
2. Stainless simbi mativi pajira riya
Stainless simbi mativi mesh yakakodzera peturu, makemikari, makemikari faibha, rabha, dhayi kugadzira, simbi, mushonga, chikafu uye mamwe maindasitiri. Isimbi isina waya waya yakarukwa mumhando dzakasiyana dze mesh uye jira, ine yakanaka acid, alkali, yakasimba tembiricha kuramba, yakasimba simba uye kupfeka kuramba.
3. Stainless simbi gobvu pajira riya
Chinyorwa: simbi isina waya simbi kuruka: isina kurukwa simbi isina chinhu dense mesh, twill rakarukwa simbi isina tsvina dense mesh, bamboo ruva rakarukwa simbi isina simbi dense mesh, musiyano wakarukwa simbi isina tsvina dense mesh. Performance: yakatsiga uye yakanaka kusefa kusefa. Kushanda: inoshandiswa muaerospace, petroleum, kemikari nemamwe maindasitiri. Fekitori yedu inogona kugadzira uye kugadzira mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi
Tsananguro yesimbi isina waya waya mesh ndeye 20 mesh - 630 mesh
Zvishandiso zviri SUS304, SUS316, SUS316L, SUS302, nezvimwe.
Kunyorera: inoshandiswa pakuongorora uye kusefa mune acid uye alkali nharaunda, sedhiza screen mune peturu mafuta indasitiri, skrini firita skrini mune kemikari fiber indasitiri, uye pickling mambure mune electroplating indasitiri
Iyo yekumhanyisa mambure inogadzirwa nematanho mashanu emambure, iyo yepakati ndiyo firita yakaturikidzana, iwo maviri epakati akaturikidzana ndiwo giraidhi yakaturikidzana, ekunze maviri akaturikidzana ndiwo rutsigiro rukoko, hushoma filtration kukosha kweiyo sintering mambure i1 micron.
Upfu sintering, inozivikanwa se porous kusefa, ine yakanyanya kumanikidza kutakura pane waya mesh sintering, uye kwayo kusefa kwekutsvaira idiki. Iko kushoma kwekutsvaira kukosha kunogona kusvika 0.45 μ M
Stainless simbi pajira riya zvinhu: isina simbi mesh waya, nickel waya, yendarira waya. Inonyanya kushandiswa kune gasi uye kusefa kwemvura uye kupatsanurwa kweimwe midhiya.
Simbi isina waya inopesana nekupisa, asidhi, ngura uye kusakara. Nekuda kwehunhu uhwu, simbi isina waya simbi waya inowanikwa zvakanyanya mukuchera, makemikari, chikafu, mishonga uye mamwe maindasitiri.
Industrial Gasi Sefa, Stainless Simbi Sefa, YeMotokari Sefa, Stainless Simbi Mhepo Kuchenesa, Sefa Yemvura, Mafirita Emhepo,